Stepper moto ngwa ụlọ ọrụ
3-adọ moto ọkwọ
AKWPKWỌ AKWEDKWỌ AKWEDKWỌ AHED
nkpuchi Ndinam igwe
Igwe na-abụghị ọkọlọtọ
Medical ọgwụ asọfe igwe ịgbado ọkụ igwe spraying igwe seramiiki ebi akwụkwọ igwe batrị asọfe igwe crystal egweri igwe nkwakọ igwe PCB mkpọpu ala eriri igwe mkpọpu ala igwe kọmputa ewepụghị-akpa igwe textile ígwè mkpọchi uwe akpaka ụfụfụ n'ibu inkjet igwe ọgwụ na akụrụngwa ọgwụ hosiery usoro akpụkpọ ụkwụ igwe ATM Machine spraying akụrụngwa ịgbado ọkụ akụrụngwa lathe igwe igwe na-eme igwe ihe na-acha ahihia ma na-egbuchapu ahia ahia ahia ahia ahia akara ugwo ahia inkjet plotter machine photo machine logistics equipment ikanam nhazi igwe ihe nkpuchi igwe kristal siri ike aluminom waya ntaneti igwe SMT akụrụngwa nkwakọ ngwaahịa akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa POS igwe mkpuru igwe na-egwu igwe mkpuru igwe igwe egwuregwu igwe
Atọ akụkụ atọ
CNC lathe CNC igwe Mịpịpịa Dispenser Nkọwapụta igwe ọkụ ọkụ ọkụ akuku igwe Projector Secondary element, three coordinate measurement machine
Laser ịcha igwe laser ịgbado ọkụ igwe laser marking igwe laser oyiyi
Winder batrị labeling igwe
Igwe ahia ahia nke akara akara ahia nke igwe na -emepụta igwe
Ihe nkesa bu ihe eji eme ihe maka mmeghari nke ihe eji eme ihe site na XY. Mgbe ị na-ekesa, ọsọ dịtụ obere, yabụ akụrụngwa a chọrọ ịma jijiji na mkpọtụ dị elu maka moto steepụ ahụ. A na-ejikarị akụrụngwa a eme ihe na gburugburu ebe dị jụụ, ihe ziri ezi maka ịkesa na-adịtụ elu. Ọ bụrụ na enwere nsogbu nke nhazi vibration, mmetụta nhazi ahụ ga-abụ ogbenye, yabụ etinye igwe steepụ anyị na akụrụngwa a. Mmetụta dị mma.
Yiri akụrụngwa gụnyere: laser ọnwụ igwe, ule akụrụngwa, ule akụrụngwa, laser ịgbado ọkụ igwe, laser marking igwe, jig.
Obere ọsọ na ngwa ngwa ngwa ngwa
Igwe ihe osise
Na mgbakwunye na ọdịdị dị mma nke ịkpụzi ngwa ngwa, igwe na-akpụ akpụ kwesịrị igosipụta ngwa ngwa ọsọ ọsọ. Ọ na-esiri ike ma ọ bụrụ na moto stepper na onye ọkwọ ụgbọala nwere àgwà abụọ a. General stepper moto na draịva siri ike iru. Dịka ọmụmaatụ, nkwụsi ike nke ụzọ atọ ga-aka mma, mana ọ bụghị nnukwu ọsọ, ọ na-esiri ike ịchọta ihe ndị ahịa chọrọ. Isi ahịa: Wenzhou Golden Eagle na na.
Yiri chọrọ maka akụrụngwa na-agụnye: siri ike igwe, aluminum waya ịgbado ọkụ igwe, ahazi e ji atụ ngwá, teepu igwe, sorting igwe, wdg
Post oge: Apr-28-2019
Okwu: No.18 Hengshan Road, New District, ChangZHou, Jinagsu, China
Afọ Ọhụrụ China